Kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada jaamacadda Slaama oo maanta lagu qabtay Muqdisho “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada jaamacadda Slaama oo maanta lagu qabtay Muqdisho “Sawirro”
Kulankani oo looga hdalayaay sidii sare loogu qaadi lahaa kuliyadaha kaladuwan oo ay bixiso jaamacada salaama islamarkaan uu soo qaban qabaiyay mamaulka jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulankaa ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiinta maamulka jaamacadda Salaama, macalimiin iyo marti sharaf kale iyo ardayda wax kabarata jaamacadaasi Salaama ee magaalada muqdisho.
Intii uu socday kulanka ayaa la isku dhaafsanayaay fekredo ku aadan sida loo horumarin karo waxbarashada ardayda jaamacadaasi, waxaana laga soo jeediyay hadalo muhiim ah oo ku aaddan baahiyaha loo qabo dhinaca horumarinta waxbarashada jaamacadda.
Mas’uuliyiintii kulankaasi ka hadalshay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha golaha sare ee jamaacada Salaam Dr. Xasan Cali Maxamed iyo C/qaadir Axmed Mahad waxaana ay sheegeen in ay dadallo xooggan ugu jiraan sare u qaadista tayada waxbarasho ee ardayda jamacadda Salaam ee magaalada muqdisho si ay uga qeyb qaataan horumarka dalkooda.
Madaxweynaha oo dib ugu soo laabtay Muqdisho